Waa Maxay Sababta Uu Madaxa Maamulka Man United Ed Woodward Ugu Safray Magaalada Paris
Wednesday January 15, 2020 - 01:32:12 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Madaxa maamulka Manchester United Ed Woodward ayaa u safray magaalada caasimada Paris ee dalka France
waxayna tani keentay in ay taageerayaasha United aaminaan in uu heshiis soo dhamaystirayo.
Taageerayaasah Manchester United ee indhaha gorgorka ah leh ayaa arkay Ed Woodward oo ku safraya tareenka Eurostar oo ku sii jeeday magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska.
Ed Woodward ayaa ku sugnaa magaalada London ee dalka England halkaas oo uu kaga jiray wadaxaajoodka u socday maamulka kooxda Sporting Lisbon ee ay Red Devils ka doonaysay saxiixa Bruno Fernandes.
Laakiin markii uu Ed Woodward u ambabaxay Paris waxaa markiiba loo fasirtay in uu soo gaba gabaynayo dhamaystirka heshiiskii ay Man United ku doonaysay xidiga khadka dhexe ee Bruno Fernandes.
Laakiin wargayska Express Sport ayaa xidhiidh uu la sameeyay kooxda Man United waxaa loo xaqiijiyay in Ed Woodward uu u safray magaalada Paris balse uu safarkiisu yahay mid aan ku lug lahayn suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waxaa Express Sport loo sheegay in Ed Woodward uu Paris ugu safray hawlo kale oo kooxda ah taas oo hoos u dhigtay rajadii ay jamaahirta Man United ka qabeen in Woodward uu u baxay soo dhamaystirka heshiikii Bruno FernandesManchester United iyo Sporting Lisbon ayaa wada xaajoodyo kala duwan soo galay iyada oo Man United doonaysa saxiixa Bruno Fernandes balse Sporting ayaa diyaar u ah in xidigo Man United ka mid ahi ay heshiiskan qayb ka noqdaan.
Marcos Rojo oo ay Sporting doonayso in uu qayb ka noqdo heshiiska Bruno Fernandes ayaan wali ogolaan in uu Old Trafford ka baxo waxaana la sugayaa haddii safarka Woodward ee Paris uu dardar galin doono dhamaystirka saxiixa Bruno Fernandes